I-Ultrasonic Custom processing Service - Hielscher Ultrasound Technology
Hielscher Ultrasonics isazi uma kuziwa processing ultrasonic. Asigcini nje ukunikeza ama-ultrasonicators anamandla webhubhu nembonini, kodwa sikunikeza isevisi ukucubungula izinto zakho njengomkhiqizi we-ultrasonic e-headquarter eJalimane, futhi.
Njengomkhiqizi wezinhlelo ze-ultrasonic ezinamandla kunazo zonke, i-Hielscher inikeza inqwaba ye-processing ultrasonic umthamo wokucubungula imininingwane yakho mayelana nesicelo sakho esenziwe ngezifiso.
Kungakhathaliseki ukuthi uhlakulela umkhiqizo omusha noma unesikhala sokukhiqiza esinqunyelwe, insizakalo yokukhiqizwa kwe-Hielscher ye-toll yokucubungula i-ultrasonic isisombululo!
Sifake kalula ama-processor ultrasonic yezimboni ze-batch kanye ne-sonication eqhubekayo ye-inline.
Ukuhlolwa kokungenakwenzeka kokungena engozini kumathuluzi enqubo yethu
I-JIT – nje-in-time: sinikeza imiqulu yezidingo zakho zokukhiqiza
Ukusebenza komsebenzi emikhiqizweni yekhwalithi ephezulu
Kungakhathaliseki ukuthi ama-batches amancane noma imifula ephezulu, sinemishini efanele kusayithi
Sakha futhi senze ngcono inqubo ye-ultrasonic
Kuye ngezinhloso zakho, ivolumu nenqubo yokucubungula, umkhiqizo wakho uzondla ngokusebenzisa I-UIP2000hdT, I-UIP4000hdT noma UIP16000 i-ultrasonicator.
ukuhlaziywa / ukulinganisa okulandelanayo kokuqukethwe kokuqala nomkhiqizo wokugcina
ukusetshenziswa kwenqubo ephelele ye-ultrasonic kuhlanganisa amandla ultrasonics, ipompo, ama-batches / amathangi, imishini yokupholisa
Ayikho isikhathi esinqunyiwe sokuletha noma ukufakwa
Ayikho imali yokutshalwa kwemali
Awekho amakhono okusebenza adingekayo
Awekho izimvume ezengeziwe
Azikho izindleko zokondliwa ezihlobene nemishini
Asikho isikhala sendawo esengeziwe
Azikho izingxenye ezisele
Abekho abasebenzi abengeziwe
Inkululeko yokulungisa amazinga okukhiqiza noma kunini
Izindleko ezingabizi futhi ezilungiselelwe ngaphambili
I-Hielscher ngokuvamile iqhuba amayunithi we-approx. 1m3.
Le ndaba kufanele ibe:
inqubo yokushisa 0 – 100 degC (amanye amazinga okushisa ngesicelo)
Ukukhokhiswa ngamandla ngamandla we-kWh noma i-unit / bulk quantity
Thintana nathi namuhla ukuze ufunde kabanzi mayelana nethuba le-CPS ultrasonic! Sizokujabulela ukuxoxa ngenqubo yokukhiqiza yomkhiqizo wakho!
Ukusetshenziselwa ukukhokhwa kwezikweletu kubuye kubhekiswe ngokuthi ukusetshenziselwa inkontileka, ukukhokhiswa kwemali, ukukhokhiswa kwamaholide, ukuguqulwa kwama-toll, ukukhiqizwa kwama-toll, noma ukukhiqizwa komkhuba.